Ebumnuche asaa kpatara na afọ ojuju gị agaghị adaba na Millennials | Martech Zone
Enwere oge ụfọdụ mgbe m gụrụ nchọta akọwapụtara na otu igwe mmadụ ma ọ bụ mpaghara ala nke m na-asụ ude ntakịrị. Anaghị m ekwu na akụkọ a na NewsCred abụghị ihe dị mkpa maka ndị na-ere ahịa ka ha buru n'uche, mana ekwenyere m na anyị na-agakarị izugbe data ma mgbe ụfọdụ na-abịa nkwubi okwu na-ezighi ezi.
M na-ajụkarị mmadụ, ị ga - achọ iru ndị 10,000 nwere ọnụego nzaghachi 1% ma ọ bụ ndị 500 nwere ọnụego nzaghachi 25%? Ọ bụrụ na ị na-agba mgba na mgbakọ na mwepụ - nke ikpeazụ ga - eme ka mmadụ 25 ọzọ zaghachi. Ya mere, mgbe ụfọdụ, ọ gaghị aga ebe nkezi… mgbe ụfọdụ ị ga-aga miri emi ebe niches dị.
N'ezie, n'ihe banyere ọtụtụ puku afọ, enwere m ike ịrụ ụka na iru Ọzọ nwere ike ghara ịrụpụta ihe. Ihe data sitere na nyocha a gosiri na ha achoghi ire ha… Gini mere ị gha eji mee ka iru gi karie ka ere ha n'ofe ndi mmadu na ndi mmadu? Enwere m ike ịkwado mgbasa ozi mmekọrịta dị ka onye na-ajụ, mana atụmatụ ahụ ga-adị iche kpamkpam dabere na ngalaba m na-achọ itinye aka na ya.
Kedu ihe kpatara ụdị aha ji eche banyere ọtụtụ puku afọ? Site na 2020, puku afọ gara aga ga - enweta ihe karịrị ijeri $ 1.4 na imefu ike. Maka ụdị, nke ahụ pụtara na ọ bụrụ na ịnweghị ike iru ọtụtụ puku afọ, ị naghị eso usoro nke ọdịnihu. Ọdịnaya na-eme ka njikọta nwee njikọ, mana ọ bụrụ na ọdịnaya gị enweghị ike itinye aka na ndị na-ege gị ntị, karịa gịnị bụ isi? 62% nke puku afọ na-eche na ọdịnaya dị n'ịntanetị na-eme ka ha nwekwuo mmetụta na iguzosi ike n'ihe nye otu akara, mana naanị 32% na-ahụta nkwukọrịta akara taa na-enye aka.
NewsCred na-enye ndụmọdụ ndị a ị ga-eji megharịa ọtụtụ puku afọ:
Mee ka ọdịnaya ndị mmadụ nwee pụrụ iche ọdịnala ọdịnala.
Gbaa mbọ hụ na ọdịnaya dị bara uru ma obu nyere aka kwupụta idozi nsogbu ụbọchị niile nke puku afọ.
Zere ịbụ ahịa-y ma ọ bụ nkwado onwe onye.
Debe ya obere.
Chọsie ike na- na-akpali echiche na ọgụgụ isi.
Be na-akpa ọchị
Emebela ego ọgwụ nje ma ọ bụ nkwado ndị mmadụ naanị.
Gbaa mbọ hụ keonwe site na ọnụahịa, ebe, agbụrụ, wdg.
Edosa usoro ndị dị mfe mgba na share.
Iji mụtakwuo banyere iji ọdịnaya gaa ahịa ruo ọtụtụ puku afọ, gụnyere nchọpụta anọ nke ụdị ndị nwetara ya, budata Ntuziaka Millennials n'efu nke NewsCred taa!
Tags: ọdịnaya ọdịnayacontent Marketinginfographicọtụtụ puku afọihe omuma ihe omumaakụkọ